Rindrambaiko maimaim-poana any am-pianarana | Avy amin'ny Linux
Androany isika dia hiresaka fandaharana maimaim-poana izay azon'ny mpampianatra ampiasaina amin'ny ambaratonga sekoly ambaratonga faharoa, indrindra any amin'ny faritra computing.
Ity dia fandraisana anjara avy amin'i Barón Ashler, ka lasa iray amin'ireo mpandresy tamin'ny fifaninanana isan-kerinandro: «Mizarà izay fantatrao momba ny Linux«. Miarahaba anao Baron Ashler!
1 Ny ampahany ara-dalàna
4 Tsy fahampian'ny fahalalana na hakamoana
5 Inona no azontsika atao?
Ny ampahany ara-dalàna
Araka ny fantatry ny rehetra tsara amin'ny andrim-panjakana, ny rindrambaiko rehetra izay apetraka amin'ny solosaina dia tsy maintsy manana fahazoan-dàlana am-boalohany mba hisorohana ny sazy ataon'ny andrim-panjakana na federaly fanamarinana. Soa ihany koa fa misy safidy hafa, iray izay maimaim-poana, tsy lafo, ary manome kalitao mitovy amin'ny programa manana.
Io no anaran'ny rindrambaiko manaja ny fahalalahan'ny mpampiasa rehetra nahazo ny vokatra ary, noho izany, rehefa azo dia azo ampiasaina malalaka, adika, ianarana, ovaina ary zaraina amin'ny fomba maro samihafa. Raha ny filazan'ny Free Software Foundation, ny rindrambaiko maimaimpoana dia manondro ny fahalalahan'ny mpampiasa mihazakazaka, mandika, mizara, mandalina, manova rindrambaiko ary mizara rindrambaiko novaina.
Manome antoka ireto fahalalahana manaraka ireto izy:
Fahafahana 0: ny fahalalahana hampiasa ilay programa, na inona na inona antony.
Fahafahana 1: fahalalahana handinika ny fomba fiasan'ny programa sy hanovana azy, hampifanaraka azy amin'izay ilainao.
Fahafahana 2: fahalalahana mizara kopian'ny programa, izay azonao hanampiana ny mpiara-monina aminao.
Fahafahana 3 - Ny fahalalahana hanatsara ny programa ary hampahafantatra amin'ny besinimaro ireo fanatsarana ireo mba hahazoan'ny mpiara-monina tombontsoa rehetra.
Ny orinasa ao ambadiky ny rindrambaiko maimaimpoana dia miavaka amin'ny alàlan'ny fanolorana serivisy fanampiny amin'ny rindrambaiko toy ny: ny fanaingoana sy / na ny fametrahana azy, ny fanohanana ara-teknika, ny fanomezana, ny fanohanana na amin'ny maha singa iray amin'ny andraikitra ara-tsosialy orinasa; mifanohitra amin'ny maodelim-pandraharahana mifototra amin'ny fahazoan-dàlana amin'ny rindrambaiko mihidy.
Izy io dia iray amin'ireo teny ampiasaina hilazana ny fitambaran'ny kernel na kernel maimaim-poana mitovy amin'ny Unix antsoina hoe Linux miaraka amin'ny rafitra GNU. Ny fivoarany dia iray amin'ireo ohatra misongadina indrindra amin'ny rindrambaiko maimaimpoana; ny kaody loharano rehetra ao aminy dia azo ampiasaina malalaka, ovaina ary zaraina indray amin'ny alàlan'ny fehezan-dalàna GPL (Lisansa GNU General Public) sy lisansa hafa maimaimpoana hafa.
Linux dia afaka miasa na amin'ny tontolon'ny sary na amin'ny maody console. Ny console dia mahazatra amin'ny fizarana mpizara, raha ny interface interface kosa dia miantefa amin'ny mpampiasa ny trano sy ny orinasa. Toy izany koa, misy ihany koa ny tontolon'ny birao, izay andiana programa voarafitra amin'ny windows, sary masina ary rindranasa maro izay manamora ny fampiasana ny solosaina. Ny birao malaza indrindra amin'ny GNU / Linux dia: GNOME, KDE, LXDE, Xfce, E-17, sns.
Amin'izany famaritana fohy rehetra izany izao dia fantatray fa tsy manao piraty rindrambaiko izahay mba hahafahantsika miala sasatra mora ary mametraka programa maimaimpoana amin'ireo milina ilainay.
Tsy fahampian'ny fahalalana na hakamoana
Ny tsy fahampian'ny fahalalana dia anton-javatra iray mitaona ka ny rindrambaiko maimaimpoana dia tsy ampiasaina amin'ny sehatra lehibe kokoa. Amin'ny sehatry ny fanabeazana dia noho ny zava-misy indrindra fa ny andrim-panjakana ambony dia tsy mampiasa CD mivantana avy amin'ny fizarana Linux amin'ny taranja siansa ifotony. Mametra ny tenanao fotsiny ianao hanonona ireo rafitra fandidiana hafa amin'ny teoria fotsiny ary hiara-miasa amin'ny Windows, Office, C ++ compiler, sns.
Antony iray hafa ny hakamoana. Amin'ny tsy fanomezana azy ireo fampiharana amin'ny CD mivantana satria mieritreritra ianao fa tsy hiasa amin'ny sehatry ny asan'ny mpianatra izany, satria ampiasaina any am-piasana ny programa manokana. Na izany aza, amin'ity fomba ity dia hanana hevi-diso momba ny solosaina ny tanora ary tsy hianatra ireo dingana tokony harahina am-po. Minoa ahy fa hisaotra anao tsy misy fetra izy ireo.
Amin'ireo lohahevitra izay mampiasa ny mpandefitra teny, takelaka ary fampisehoana miaraka amin'ny slide, ny vahaolana mety indrindra arosoko dia ny misintona ny LibreOffice avy amin'ny pejy ofisialy ary apetaho amin'ireo milina ilainao.
Toy izany koa, ho an'ny taranja fanaovana sary sokitra raha toa ka manana fahazoan-dàlana CorelDraw ao amin'ny laboratoara ny sekoly, dia mamporisika anao hiasa amin'ny Inkscape. afaka download it Na ampiasao ho lozisialy lehibe rehefa tsy manana lisansa CorelDraw ianao.
Raha mampianatra taranja computing fototra ianao dia asaina manaisotra ny sary ISO ianao ary handoro ny CD na DVD ny iray amin'ireto tetikasa ireto:
Aza adino fa misy ihany koa ny fizarana miompana amin'ny sehatry ny fanabeazana, toy ny tranga misy Edubuntu.
Ny hetsika hataonao dia afaka tsiroaroa na ampahatelony, miankina amin'ny isan'ny mpianatra anananao ao an-dakilasy sy izay tianao holaniana amin'ny CD. Hetsika iray hafa azo tanterahina dia ny fanomezana fikarohana fanadihadiana momba ny rafitra fiasa Linux, fizarana, tombony sns. Raha toa ka efa tsy ampy fitaovana informatika intsony ny sekoly dia azon'izy ireo atao ny mamerina amin'ny laoniny ireo milina ireo amin'ny alàlan'ny fanaovana fanao fametrahana fizarana maivana toa ny Lubuntu o Puppy linux.
Raha misy foto-kevitra momba ny famelabelaran-kevitra dia manome fotoana mety Studio studio izay azo raisina ho programa tsara tahaka ny Flash.
Ny lohahevitra iray hafa tafiditra dia ny famoronana pejy HTML. Ao anatin'izany no ahafahanao manaraka làlana roa: ny notepad na rindrambaiko famoronana tranonkala. Raha misafidy ny safidy voalohany ianao, dia tsy misy ny fanenjehana satria ny rafitra miasa rehetra dia misy mpampanonta lahatsoratra tsotra. Fa raha te hampiasa rindranasa toa Dreamweaver ho mora ianao, dia manoro hevitra anao aho manandrana Bluefish, izay hanao asa tsara amin'ny famoronana pejy HTML. Azonao atao koa ny mameno ilay lohahevitra amin'ny alàlan'ny programa PHP (misintona XAMPP) hanao pejy mavitrika izay hanompo ny zanakalahinao amin'ny tetik'asa ho avy.
Raha toa ianao ka mpampihorohoro amin'ny programa ary te hampianatra fiteny iray ianao, ny safidy natolotra ho an'ireo vao manomboka dia Python sy Rubí, izay miavaka amin'ny fanamorana ny syntax, dia mianatra haingana sy miampita sehatra.
Fa raha ianao dia iray amin'ireo izay tia mampianatra ny fomba taloha amin'ny C na C ++ dia azonao atao ny mampianatra ny zanakao amin'ny fomba mitovy aminy amin'ny Windows. Ny sisa ataonao dia ny mametraka ny compiler mifanentana sy ny tonian-dahatsoratra izay mamela ny fanovana kaody haingana sy mora, toy ny tranga misy amin'i Gedit na Kate.
Mikasika ny fototry ny fandaharana, azonao atao ny mampiasa ilay fitaovana DIA ho an'ny famelabelarana ny kisary mikoriana ary amin'izany dia hialana amin'ny fampiasana taratasy sy pensilihazo.
Satria ireo mpamaky hajaiko dia mankasitraka ny safidy hafa omena, ny sisa dia ny manome vahana lozisialy maimaimpoana, mahazoa kilalao betsaka araka izay azonao atao avy amin'izy ireo ary tsarovy fa miankina aminao ny fetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Rindrambaiko maimaim-poana any am-pianarana
Tena marina fa ny hakamoana, tsapako tamin'ny voalohany tao anatin'izany vondron'olona izany fa niova hatramin'ny fiandohan'ny taona lasa. Betsaka ny zavatra nianarako momba ny Free Sw (saingy tsy ampy) ary izany dia mandrisika ahy hianatra foana. Ankoatr'izay, ity firehan-kevitra ity (raha izany no azonao iantsoana azy) dia nanokatra varavarana maro ho ahy ary nahatonga ahy hihaona amin'ny olona lehibe izay itoriako ny zavatra tiako amin'ny fanaovana computing 🙂
Araka ny voalazan'i OScar Gonzalez, hisy fotoana hahafahan'ny olona mahatsapa fa mahafinaritra tokoa ny tontolon'ny Free Software!
PS: Raha ny fanazavana dia tsara be ilay paositra!
Oscar Gonzalez dia hoy izy:
Lahatsoratra iray tena tsara izy io, ny zavatra ratsy dia tsy avelan'ny sekoly, ho ahy, fony aho mpandahateny tao Flisol, Escom, IPN, ireo solosaina tao anatiny dia nanana ubuntu, saingy mazava ho azy, kinova efa taloha be io. , ao amin'ny Sekoliko izay mandalo, bakalorea ary misahana ny asa ankehitriny, ny solosaina dia manana Windows ihany, ao amin'ny sekoly misy ahy izao dia manolotra ahy hametraka Ubuntu sy Windows 64 bitika amin'ny booty roa, satria mampiasa 32 ao miaraka amina ram 8GB, tsotra fotsiny izy io tsy ampiasaina noho ny windows, ho an'ireo solosaina 50 rehetra, tsy neken'izy ireo fotsiny. Amin'izany no tiako hahatongavana amin'ilay teboka hoe, na dia tsy manaiky aza izy ireo dia mila miady isika, indray andro any dia hanaparitaka rindrambaiko maimaimpoana bebe kokoa any an-tsekoly sy hatraiza hatraiza.
Miaraka amin'ny fanandramana sy ny teny rehetra izahay dia nanaparitaka bebe kokoa.
Valiny tamin'i Oscar Gonzalez